Ukungqubuzana koMthetho Wezikole noMthethosisekelo – Bayede News
Ukungqubuzana koMthetho Wezikole noMthethosisekelo
INkantolo iyalele ukuthi isikole iKenmont kumele sikhokhe izindleko zomfakisicelo kusuka eNkantolo Enkulu kanye neNkantolo Enkulu Yokudlulisa Amacala.
Posted on 1 December 2019 1 December 2019 by nguAnathi Mtaka
NgoLwesithathu mhla ziyisi-9 kuMfumfu kowezi-2019 ngehora leshumi ekuseni iNkantolo YoMthethosisekelo ikhiphe isinqumo ngesicelo sokuqinisekiswa komyalelo yiNkantolo Enkulu yaseNingizimu Afrika, KwaZulu-Natal Local Division, Durban, kumenyezelwa iSigaba 58A (4) soMthetho Wezikole zaseNingizimu Afrika 84 we-1996 (uMthetho Wezikole) ongavumelekile ngokoMthethosisekelo. Isikole seKenmont kanye nesigungu esilawulayo bafaka isicelo sekhefu lokufaka isicelo sokuphikisana nesinqumo seNkantolo Enkulu.
Umfakisicelo uMnu uDeverajh Moodley uphumelele ukuphonsela inselelo inqubomgomo yokwamukelwa kwesikole iKenmont eNkantolo Enkulu eyalele abamangalelwa besikole ukuthi bakhokhe izindleko zakhe zomthetho. Abamangalelwa besikole bathatha lolu daba lapho befake isicelo eNkantolo Enkulu Yokudlulisela Amacala esichithile isicelo futhi, njengeNkantolo Enkulu yakhipha umyalo wezindleko egameni lomfakisicelo.
Imali ekhokhwayo yentela yomfakisicelo ifinyelela ezi-R600 000, ngaphandle kwenzalo. Ngemuva kokufuna ngaphandle kwempumelelo imiklomelo yakhe yezindleko ezivela kubaphenduli besikole, umfakisicelo uthole incwadi egunyaza ukuthi athathe izimpahla zesikole futhi waganisha i-akhawunti yasebhange lesikole kanye nokukhokhelwa ngenani lemoto yesikole. Abamangalelwa besikole bavele eNkantolo Enkulu ngokushesha befuna umyalelo wenkantolo ubeke eceleni incwadi egunyaza ukuthathwa kwempahla kanye nokunokukhokhelwa ngenani layo. Abamangalelwa besikole bathembele eSigabeni 58A (4) soMthetho Wezikole esivikela impahla yezikole zikaHulumeni ekukhokheni ngayo ngenxa yanoma yiziphi izinyathelo zomthetho ezithathelwe isikole. Umfakisicelo ufake isicelo sokuphikisa isicelo, phakathi kokunye, ukuze aveze iSigaba sama-58A (4) soMthetho Wezikole ngokungahambisani noMthethosisekelo. INkantolo Enkulu yavuma isicelo somfakisicelo futhi yaveza ukuthi lesi Sigaba asivumelekile ngokoMthethosisekelo.
Umfakisicelo wabe eseya eNkantolo YoMthethosisekelo ukuze aqinisekise isimemezelo sokungasebenzi kwalesi Sigaba. Uveze ukuthi ukuphathwa ngendlela engafani kwesikole sikaHulumeni maqondana nokufakwa kwezimpahla ukuze kwaneliswe isikweletu sokwahlulela kwephula ilungelo lakhe lokulingana ngokwephula iSigaba 9 (1) soMthethosisekelo nokuthi ukungakwazi kwakhe ukuthola inzuzo ngezindleko ezinhle ukuhleleka kwakwephula ilungelo lakhe leSigaba 10 lesithunzi. Esikhalweni sabo sokuphikisana nesiqinisekiso, abamangalelwa besikole baphikise ukuthi ngaphansi kweSigaba 60 (1) soMthethosisekelo Wezikole, uMbuso unesibopho sokulawula noma isivumelwano senkontileka noma ukulahleka uma kwenziwa umsebenzi wesikole. Ngokwencazelo yabo, lokhu kusho ukuthi, UMbuso hhayi isikole ebekufanele ukhokhe izindleko zomfakisicelo. Ngakho-ke umfakisicelo ubelungiswa kabusha ngaphansi kwalesi Sigaba futhi ilungelo lakhe leSigaba 9(1) alizange liphulwe. Abamangalelwa besikole baphinde bathi iSigaba 58A(4) sifundwe neSigaba 60(1) soMthetho Wezikole sisekela ilungelo lemfundo. Ngakho-ke kwakungadingeki ukuthi iSigaba 58A(4) sithiwe asivumelekile ngokoMthethosisekelo.
INhloko YoMnyango, uMnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal, uNgqongqoshe Wezemfundo, uNgqongqoshe Wezobulungiswa Nezokuhlunyeliswa Kwezimilo noNgqongqoshe Wezemfundo Eyisisekelo (abamangalelwa bakaHulumeni), owesithathu kuya kowesithupha kwabamangalelwa abamangalelwale, baphikisana nokuthi kwenziwa okungaqondakali kokuqukethwe ngokuthi izindleko zomenzi wesicelo kufanele zikhokhwe nguMbuso kungekho myalelo wezindleko onikezwe uMbuso. Baphinde bahambisa ukuthi abamangalelwa besikole baxwayiswa ngokuthi bangazibandakanyi nezimangalo. Abamangalelwa bakaHulumeni bathathe umbono wokuthi iSigaba 58(4) akufanele kuthiwe asivumelekile ngokoMthethosisekelo. Isikhungo Somthetho Wezingane, nesivunyelwe njengomngani wenkantolo sithe izindleko ezikhishiwe ngokulandela isimangalo esivela ekuchitshiyelweni kwenqubomgomo yokwamukelwa esikoleni akuyona inkambiso noma ukulahleka kwesivumelwano , noma ukulahlekelwa kwenqubomgomo yokwamukelwa esikoleni “umsebenzi wesikole “ njengoba kuhlongozwe eSigabeni 60(1) soMthetho Wezikole. Ngakho-ke , isiphakamiso sabamangalelwa besikole sokuthi isigaba 60(1) esisekela ukulungiswa komenzi wesicelo kuqondwe kabi. Ilungelo lemfundo eyisisekelo ibaluleke kakhulu kangokuba azikho izindlela ezingancishisiyo zokuyivikela, futhi isimemezelo sokungafaneleki akufanele siqinisekiswe.
imingcele futhi kufanelekile ngaphansi kweSigaba 36(1) uma uMthethosisekelo unqunyelwe. Saphetha ngokuthi inhloso yomkhawulo elethwe yilesi Sigaba esinqatshelwe 58A (4) ukugwema imiphumela emibi engabangelwa ukunamathiselwa kwezimpahla zesikole, ngaleyo ndlela ivikele ilungelo lemfundo eyisisekelo futhi iqinisekise ukuthi intshisekelo yezingane ibaluleke kakhulu. Umkhawulo ngakho-ke uqondaniswe kahle nenhloso yawo futhi azikho izindlela ezingancishisiyo zokufeza lenhloso.
Mayelana nesiphetho emiklomelweni yezindleko zalowo ofaka isicelo, iNkantolo iqhube yathi yize kungavunyelwe ukukhokha ngezimpahla zesikole sikaHulumeni, iSigaba 58(4) asikukhiphi ukunikezwa kwamiyalelo okuzwakala ngemali, kufaka phakathi izindleko, kufakwa ezikoleni zikaHulumeni.
INkantolo ithole ukuthi okufakwe emthethweni ngokomthetho wesikole sikaHulumeni sokumangalela nokumangalelwa ngegama lakhe kungamandla okukhokha izindleko zecala eliphikisayo uma iyalela kanjalo inkantolo. Izikole zikaHulumeni azikwazi ukunikwa amandla okumangalela nawokumangalelwa kodwa zivikeleke emiyalweni yezindleko ezingezinhle. NgokweSigaba 37(6)(c) soMthetho Wezikole, isigungu esilawulayo sesikole sikahulumeni sinikezwe amandla okukhokha izindleko zomthetho. Ngakhoke iNkantolo yaphetha ngokuthi isigungu esilawula isikole iKenmont sinomthetho osemthethweni wokukhokhisa izindleko zenkokhelo yomfakisicelo.
INkantolo iyalele ukuthi isikole iKenmont kumele sikhokhe izindleko zomfakisicelo kusuka eNkantolo Enkulu kanye neNkantolo Enkulu Yokudlulisa Amacala. Iphinde yayala ukuthi amalungu esigungu esilawula isikole iKenmont kumele ngawodwana noma ngokuhlanganyela, athathe izinyathelo ezidingekayo zokuqinisekisa ukuthi iyakhokhwa.